Ukulingana ekufikeleleni kwisitofu sokugonya kunye namaGorha eKhenketho kwiHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukulingana ekufikeleleni kwisitofu sokugonya kunye namaGorha eKhenketho kwiHlabathi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
Ukungalingani ekufikeleleni kwisitofu se-COVID-19 kungathintela ukukhula koqoqosho kuwo onke amacandelo. I-Saudi Arabia kunye neenkokheli zezoKhenketho kwihlabathi ziyakuqonda oku. I-FII iza kwiveki ezayo, kwaye amehlo ehlabathi ajonge eRiyadh.
Ikamva lePhulo lokuTyala imali (FII) sele liza kudibana eRiyadh. Ukhenketho ngeli xesha liza kuba nenxaxheba enkulu kwingxoxo yeenkokheli zokhenketho zehlabathi.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi Impilo ngaphandle komda weBorder ikhumbuza iSaudi Arabia kunye nabathunywa bayo abavela kwihlabathi liphela ukuba ukhenketho alunakusebenza de sonke sikhuseleke.
Ukufikelela kwisitofu sokugonya akulingani kwihlabathi. Ngelixa amanye amazwe atyebileyo enezitofu zokugonya ezininzi, amazwe angathathi ntweni anqwenela kakhulu ukuba afumane abemi bawo. Ukuchuma kubuxoki obuninzi kuhambo nokhenketho.
Ukusukela nge-17 ka-Okthobha, e-United States, i-65% yabemi ifumene ubuncinci i-shot ye-COVID-1, abanye ngoku bafumana i-booster shot yesithathu.
I-30% yabantu baseMelika bayala ukugonywa. Urhulumente ubonelela ngenkuthazo kwabo bathobela ugonyo “ingcebiso” kwaye kwangaxeshanye esoyikisa abo bangazukuthobela izohlwayo, ezinje ngokuphulukana nemisebenzi okanye ukufikelela kwiivenkile zokutyela.
ESingapore, inqanaba lokugonya yi-80%, e-China iipesenti ezingama-76, eJapan iipesenti ezingama-76, iJamani iipesenti ezingama-68 ngenani labemi elinqabileyo, i-Saudi Arabia i-68%, i-UAE 95%, i-Israel i-71%, kunye ne-Indiya i-50%, kunye nehlabathi Umyinge ngoku kwi-48%.
Ngoku imeko iba nzima. I-Russia ine-35% kuphela yabemi bayo abagonyiweyo, i-Bahamas i-34%, i-Mzantsi Afrika i-23%, i-Jamaica i-19% kwaye i-avareji e-Afrika yi-7.7% kuphela.
IBhodi yezoKhenketho yase-Afrika, phantsi kobunkokheli bukaSihlalo uCuthbert Ncube, yazibandakanya nephulo le-WTN kwiMpilo ngaphandle kwemida ukusuka kumzuzu wokuqala. Ngokunjalo noGqirha Taleb Rifai, owayesakuba nguNobhala Jikelele we-UNWTO.
UNobhala wezoKhenketho eKenya uNajib Balala wayenjalo Enye yeenkokheli zokuqala zase-Afrika ezixhasa inyathelo lezeMpilo ngaphandle kweMida yi-WTN. Ngoku ungumphathiswa wokuqala wase-Afrika ephendula kwisinyanzeliso sika-Mongameli wase-US u-Biden sokuba aphumle amalungelo awodwa omenzi wechiza le-COVID-19.
Akukho ukwala kumazwe anezinga eliphantsi lokugonya; kukho ukunqwenela ukufumana idosi eyaneleyo yokufumana iyeza lokugonya ebantwini. Kukho ukunqongophala kwezixhobo zemali ezihambisa amayeza okugonya ikakhulu kumazwe atyebileyo.
Iinkokheli zezoKhenketho ezinengqondo yehlabathi, kubandakanya noMphathiswa wezoKhenketho uBartlett waseJamaica, babenegalelo ekuvumeni iwonga kunye nendima edlalwa yiSaudi Arabia njengomdlali ophambili kwihlabathi.
Ngokuza kwe-FII eRiyadh, kunye neenkokheli zokhenketho ezili-1,000 XNUMX kwiinqwelomoya ngoku zokuya eSaudi Arabia nokuzimasa, uMphathiswa othethileyo uBartlett angadlala indima ebaluleke kakhulu njengenkokeli yehlabathi eRiyadh kwiveki ezayo. Ukulingana kwisitofu kunokuba phezulu engqondweni yakhe, ucinga ukuba ukhenketho lwaseJamaica luchaphazeleke kakhulu.
Uthungelwano lwezoKhenketho lweHlabathi, phantsi kobunkokheli boMsunguli uJuergen Steinmetz, lakuqonda oku kwiingxoxo zalo zehlabathi kumanqanaba okuqala kwaye laqala inyathelo Impilo ngaphandle kwemida ebutsheni balo nyaka ukukhumbuza umhlaba ukuba akukho mntu uya kukhuseleka kwi-COVID ade wonke umntu akhuseleke.
Kukho inkqubela esele yenziwe kodwa ngelishwa kweli nqanaba kwindyikityha yokufa, ukungalingani kwesitofu sokugonya kuyaqhubeka, nokuba ngaphezulu kweebhiliyoni ezi-6 zeedosi zokugonya ezisasazwe kwihlabathi liphela. Uninzi lwezi lusemazweni anengeniso ephezulu kanti awona mazwe ahlwempuzekileyo angaphantsi kwepesenti enye yabemi bawo agonyelwayo.
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, okwafumana isihloko se-a IQhawe lezoKhenketho kwiHlabathi liphela, iyayazi le nto kwaye iyakhumbuza eTurboNews Ukungalingani kwesitofu sokuthintela ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwihlabathi.
Kwintlanganiso yeKomiti yezoKhenketho (CITUR), uBartlett wazise ngezicwangciso zikarhulumente waseJamaica kunye neenzame zokunciphisa ifuthe elibi lobhubhane kwicandelo lezokhenketho.
Nini Ihlabathi lezoKhenketho libiza i-911, Ubukumkani baseSaudi Arabia babekhona ukuphendula nokunceda. Iibhiliyoni zeedola zabelwe ukutyala imali kwicandelo, hayi kwi-KSA kuphela kodwa kwihlabathi liphela. UMphathiswa wezoKhenketho eSaudi, oHloniphekileyo uMnu Ahmed Aqeel Al-Khateeb, uqeshe owayesakuba yi-WTTC CEO kunye noMphathiswa wezoKhenketho eMexico, uGloria Guevara, njengomcebisi wakhe ophambili. UGloria uyayiqonda geopolitics kwaye uyayazi kakuhle imeko kuqoqosho oluxhomekeke kukhenketho, njengeCaribbean.
ISaudi Arabia isenokuzama ukuzisa ikomkhulu le-UNWTO lisuka eMadrid lize eRiyadh. Isiphakamiso esinjalo kwi-UNWTO General Assembly eMorocco sisenokungeniswa. Okona kuncinci, iSaudi Arabia yayifikelele eSpain, ilizwe langoku elisingathiweyo le-UNWTO, ukuze basebenze kunye babuyise ubunkokheli kuMbutho wezoKhenketho weHlabathi osisiqhwala.
IZiko elizayo loTyalo-mali elizayo lilungiselela ukudibana eRiyadh kwiveki ezayo. Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho lase-Saudi Arabia lamema amakhulu eenkokheli zokhenketho ukuba zibe yinxalenye yale ntlanganiso.
Ukungalingani kugonyo lwehlabathi ngenene kuyingozi kwinkqubela phambili yokuvula yecandelo, kuphuhliso lwemisebenzi, nakwimpumelelo.
Abahambi abagonyelweyo banokukhetha indawo ekuya kuyo apho abasebenzi behotele kunye nabanye abasebenzi bezokhenketho bagonyiwe khona. Kuyafana nangenye indlela. Abasebenzi basehotele bafuna ukuqinisekisa ukuba bakhuselekile kwaye bayagonywa. Abafuni kunxibelelana neendwendwe zangaphandle ukuba azifakwanga.
Ukuba ngenxa yezizathu zemali ilizwe alinazo izixhobo kunye nokufikelela kwisitofu, le yimeko yoluntu lokhenketho lwehlabathi olunokuthi luhlangane kwaye luncedane ngalo. I-Saudi Arabia ingadlala indima yayo njengenkokeli esandula ukusekwa yehlabathi enengqondo evulekileyo nehlaziyiweyo, ukuququzelela nokwandisa inkxaso-mali kwelo nyathelo. Ngokuqinisekileyo i-Saudi Arabia iya kuvela njengegorha lehlabathi ukuba iphumelele.
Utyalo-mali olunje ngokufikelela ngokulinganayo kwizitofu ngokuqinisekileyo kuya kuba nakho ukubhatala imali enkulu eSaudi Arabia ngokwemeko ephakathi.
Intlanganiso ye-FII, ke, iya isiba ngokubaluleka nangakumbi ngemini.